Ngangifisa ukuthi wayelindele ingane: cazelo of phupha!
Abesifazane abaningi okungenani kanye empilweni yakho ezibuza ngalokho incazelo enembile amaphupho. Uma Ngiphuphile ukuthi ngase ngizophumela ukuba nomntwana noma usuvele singene ezweni - nanti iphuzu? Phela, noma ubani akuyona imfihlo: Amaphupho ziyingxenye ebalulekile yezimpilo zethu, futhi ezinye zazo akufanele ishalazelwe.
Uma ngiphuphe ukuthi ngikhulelwe, bese ulinde replenishment?
Eqinisweni, nokukhulelwa kanye nokubeletha - inkathi ebaluleke kakhulu ekuphileni salowo nalowo muntu wesifazane. Futhi noma yimuphi owesifazane, ngisho kunani nonke, ngezikhathi ezithile sokucabanga ngale ndaba. Futhi ngokuvamile kubonakala sengathi ngiyaphupha. Ngakho-ke, abaningi uyazibuza uma nizosho iphupho, ukuthi ngikhulelwe, kungakhathaliseki ngigijimela wezifo zabesifazane okulungiselela umthamo wemvula?
Ngokushesha uqaphele: cazelo of phupha akuyona isayensi ngqo. Konke kuncike ezicini eziningi, ezifana nobudala sowesifazane, isimo sempilo, isimo sabo emphakathini, umsebenzi, impilo siqu, esikhathini esiseduze izinhlelo esizayo njalo njalo. D.
Ngempela, kukhona amantombazane abakhuluma sengathi lezi phestri. Ngokwesibonelo: "Ngosuku olulodwa Ngangifisa ukuthi ukhulelwe, futhi ngemva kwesonto ukuqinisekisile." Kodwa ababaningi kakhulu. Ngakho, ningazifanisi kufezeka iphupho. Ungakhohlwa ukuthi ososayensi abaningi sithambekele kulokhu kucabanga ukuthi amaphupho kukhona uhlobo yengeza izitshengiselo ezivela kwamanye engqondweni yethu enganakile, okuyinto uzama ukuxazulula inkinga ethile. Ngaphezu kwalokho, iningi iphupho amabhuku sokukhulelwa akuhlangene ne kwaqedwa umndeni.
Ukukhulelwa ephusheni nencazelo yalo ngokuvumelana Freud
Umsunguli odumile psychoanalysis, inqubo babekholelwa ukuthi ukukhulelwa ephusheni kungahunyushwa nangokunembile. Abesifazane abaningi, owabona ikhulelwa ngesikhathi iphupho, unganakile noma sesikulungele ukuqala azilungiselele lo umama esizayo. Ngakho-ke, kungcono ukuphetha ngokuthi yena uzama uba umama esikhathini esizayo esiseduze.
Isimanga siwukuthi kodwa amanye amadoda ephusheni basesimweni "isimo ezithakazelisayo." Futhi avame ukubuza imibuzo efanele: "Uma ngiba indoda futhi Ngangifisa ukuthi azalele - sikhona ukuze lokho?" Freud umangalele ukuthi iphupho esinjalo kubonisa ukulungela zokuziphatha nezingokomzwelo amadoda abe ubaba esikhathini esizayo esiseduze. Ngakolunye uhlangothi, nephupho elinje athembisa enkingeni esizayo nabobulili obuhlukile.
Kusho ukuthini ukukhulelwa ephusheni? dream Miller
Yiqiniso, Dream Miller ingenye izinzuzo ethandwa kakhulu yevolumu uphinde ukusiza ahumushe iphupho. Ngakho, uma Ngiphuphe ukuthi ngingathanda ngokushesha uba umama. Lubaluleke kangakanani lolu kuyiphupho nje?
Uma leli phupho wayeyintombi, kungenzeka esikhathini esizayo esiseduze ngempela uyoba umcimbi kubuhlungu ngempela, ngokuhlanganiswa ukuhlazeka. Ezimeni lapho iphupho enjalo abone owesifazane esezikhulile ubani ubuhlobo obungathí sina indoda, it is a yisixwayiso. Mhlawumbe umshado nale ndoda kungaba ngeshwa kakhulu futhi ezinempilo enhle bangakwazi izozalwa kuwo.
Ngakolunye uhlangothi, uma ekhulelwe owesifazane iphupho, osevele uzalela ingane, kuyisibonakaliso esihle. Leliphupho ubonisa ukuthi ukuzalwa kuyokwenzeka ngokushesha, kalula futhi ngaphandle yezinkinga, futhi umntwana kuyoba ngiphilile futhi nginamandla.
Uma ukukhulelwa ngiphuphe ... Dream Kuhumusha Lofa
A incazelo ehlukile kakhulu akanikezi esingaphansi ethandwa Dream Incwadi Lofa. Okokuqala kuyafaneleka: sokukhulelwa kulokhu iwuphawu likhula futhi lokusungula untapped. Uma iphupho enjalo ubona intombazanyana ke lokho kungase kubonise ukuthi ekupheleni inqubo nokuvuthwa, kusukela kwabasanda kweva eshumini lokugcina, inguquko bayazi waze waba mdala.
Uma ukukhulelwa uyaphupha owesifazane omdala, kungaba isixwayiso mayelana nezinkinga nezinkathazo esikhathini esizayo esiseduze. Akhonza yayizibheka ephusheni ukhulelwe, kungenzeka unganakile ukungabaza isibindi sakhe futhi umthamo.
Abanye bathi iphupho-izincwadi?
Eqinisweni, kukhona nezinye nekuhumusha lezi amaphupho. Ngokwesibonelo, ngokuvumelana Italian Dream Kuhumusha sokukhulelwa ubonakala ukunothisa umuntu. Leliphupho angase abhekisele izifo ezihlukahlukene, kanye neqiniso lokuthi umuntu engaphansi kwethonya elinamandla yomunye.
Ukuba intombazane ku Dream Kuhumusha Tsvetkov - hhayi kukuhle kakhulu. It uthembisa ukukhwabanisa esikhathini esizayo. Kodwa amadoda anjengo esimweni ibonisa ukuthi sekuyisikhathi ukwakha izinhlelo efinyelela kude kangaka. abesifazane abadala abakhulelwe ephusheni ubikezela injabulo nokuziqhenya.
Amanye eziqeda amandla uthi ukukhulelwa iphupho kungaba uphawu sokuhlupheka kokuhlupheka noma ukukhashelwa kothandekayo. Uma owesifazane ebona iphupho kweminyaka yobudala emaphakathi futhi ubudala, kungaba isignali mayelana nokuthuthukiswa isifo. Kwezinye izimo, ukukhulelwa uyaphupha ukulahlekelwa. Ngakolunye uhlangothi, kukhona izincwadi iphupho ukuthi bathi bokukhulelwa ephusheni - kungcono injabulo futhi inhlanhla esikhathini esizayo esiseduze.
Bheka ukuzalwa iphupho: kuyini?
Kaningi ephusheni, abesifazane nje bakhulelwe, kodwa futhi zabasebenzi. Uma nephupho ukuthi mina lapho zizala, yilokhu? Uma lokuzalwa kwakho lwalulude, ubuhlungu kabuhlungu, kodwa yaphela kahle, ke kufakazela ukuthi ngesinye uzokwazi ukuxazulula zonke izinkinga zabo. Ngo cishe kuwo wonke amasiko iphupho nokubeletha ukubonisa izinguquko ezinkulu ekuphileni kwakho.
Kukhona amacala lapho abesifazane baphupha ukulethwa lula futhi asheshayo, alethe impumuzo enkulu. Leliphupho kungase kubonise ukuthi inkinga yakho kuzokusiza ukuxazulula eyodwa noma omunye umuntu.
Uma dream uphuza ukulethwa, Ngalesosikhathi elusa: esikhathini esizayo esiseduze nibe nilindele izenzakalo cishe ngeke kubonakale kubalulekile, kodwa ziyoba nemiphumela engalindelekile ngawe. Kwesinye isikhathi abantu bheka phupho, umuntu kusukela umndeni sizala ngenkathi befa. Leliphupho ungabika mayelana meaninglessness yokuzama yakho yokuthuthukisa ubuhlobo bethu abanye abantu.
Kwesinye isikhathi abantu benu baphuphe amaphupho kunalokho ongaziwa - bebona lokuzalwa kwabo. Uma nephupho ukuthi mina unomntwana is osanda kuzalelwa, hhawu, ikuphi iphuzu athwala iphupho? Ezinye esoteric bophezela Umbono ofanayo nge ukonakala komphefumulo. Kunoma ikuphi, kufanele ushintshe impilo yakho, uphiwe ithuba ukuqala lonke futhi, ngakho ungaphuthelwa ke.
Ngiphuphe ukuthi ngabeletha umfana, nanti iphuzu?
Ukuzalwa nomfana iphupho kungaba uphawu yinhle yini noma yimbi. Kunoma ikuphi, le ukuzalwa komntwana okunempilo uphawula inzuzo nokuchuma endlini. Kodwa uma epha zala umfana efile, kufanele uzilungiselele ukubhekana nezinselele ezizayo ngeke kube lula kangaka ukuxazulula. ukulethwa Easy zifanekisela okumsulwa, injabulo ngobuqotho esikhathini esizayo. Kodwa nokunwetshiwe inqubo zabasebenzi kukunika ithuba ukulungiselela ukubhekana nobunzima noma endleleni eya empumelelweni, kodwa ungalilahli ithemba, ngoba ngokuhamba kwesikhathi afinyelela oyifunayo.
Uma iphupho lakho umfana wazala izihlobo zakho, abangani noma nengangibajwayele ke ulungele izindaba ezingalindelekile, kodwa emnandi. Uma nomfana osanda kuzalwa khona komntwana ongafuneki ke esikhathini esizayo nibe nilindele i, imisebenzi ezingenalutho lutho. Ngezinye izikhathi ingane iphupho okuzelwe encane kakhulu noma inkulu kakhulu - ke lokho kuwuphawu olubi ukuthi esiyibika enkingeni.
Ukuze uzozala iphupho intombazane: incazelo
Yiqiniso, amaphupho lokuzalwa abhekwa lalivamile. Nokho, akuyona kuphela inqubo kodwa phansi nosana. abesifazane abaningi abanesifiso sokwazi lokho Kusho ukuthini uma ngiphuphe ukuthi Ngingumama wezingane kwentombazanyana?
Ukuzalwa kwengane zesifazane - ziwuphawu oluhle. Abesifazane abakhulelwe lithembisa ukulethwa lula futhi fast. Uma dream wena saba nengane emanzini, kwakungase lalifanekisela yimpumelelo enkulu futhi inzuzo emkhayeni. Uma uke ezele intombazane emzini wakho siqu, ungakwazi ukubala yokuthi zonke izinkinga futhi izinkinga maduzane ingaxazululwa. Uma indodakazi yakho ephusheni sengathi, kuba uphawu injabulo. Ngezinye izikhathi abesifazane belele ukubona njengoba ukuzalwa kwendodakazi yabo. Lokhu kusho ukuthi ukuphila kwengane yakho kuyoba bhá futhi zizinhle.
Washona elele ngesikhathi ukulethwa - ukuthi wesabe?
Kwesinye isikhathi amaphupho kukhona scary ngempela. Futhi uma nephupho ukuthi ngase washona ebeletha? Kufanele ngikhathazeke ngalokhu? Eqinisweni ukuchaza amaphupho enjalo kungaba ezahlukene.
Ezinye esoteric ethi ukufa iphupho ongaqhubeki ezinye amagugu ezimbi. Lokhu kungase kubonise izinguquko enamandla empilweni yakho ezilindele esikhathini esizayo. Ngezinye izikhathi iphupho olungavimba nokulahlekelwa umngane noma othandekayo yilesi sifo.
Kaningi lawa amaphupho kukhona amaphupho abesifazane abakhulelwe. Ezimweni ezinjalo zingase zibe ibonakalisa enganakile kokwesaba nokukhathazeka esizayo eshintsha t. D.
Empeleni, abesifazane abaningi banesithakazelo umbuzo ukuthi kusho lapho Ngangifisa ukuthi ukugqoka, noma baye baba ingane. Kodwa kuqala kunazo zonke kubalulekile ukuqonda ukuthi ngezinye izikhathi iphupho nje kuwukuzikhohlisa umcabango, futhi ngaso sonke isikhathi athwala incazelo efihliwe.
Lokho esikushoyo kunganika sonnik amathuna?
Geza phansi ephusheni? Kulungile!
Ababhemayo Iphupho? incwadi Dream kuzokusiza uqonde
Isidakamizwa "i-Miramistin" esivela ku-acne ebusweni: impendulo ekusebenzeni
Faka isithonjana se-degree kuzo zonke izinhlelo zokusebenza
Izinhlobo ijazi izingubo
Yokuhlanza Manual of ebusweni ekhaya
Kusukela lokho kusiza "spazgan": yokusetshenziswa
Cantemir baseMoldova Princess uMariya Petru 1: Biography, umlando ezithakazelisayo amaqiniso